Isaziso sobumfihlo se-GDPR - World Tourism Portal
Isaziso sobumfihlo se-GDPR.
At World Tourism Portal, kuyatholakala kusuka ku-https: //worldtourismportal.com/, enye yezinto ezibaluleke kakhulu kithi ubumfihlo bezivakashi zethu. Lo mbhalo weNqubomgomo Yobumfihlo uqukethe izinhlobo zolwazi eziqoqwayo futhi ezirekhodwe yi World Tourism Portal nokuthi siyisebenzisa kanjani.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga eminye imininingwane mayelana neyethu Inqubomgomo yobumfihlo, unganqikazi ukusithinta nge-imeyili ku- info@worldtourismportal.com
Singumlawuli weDatha wolwazi lwakho.
World Tourism Portal isisekelo esisemthethweni sokuqoqa futhi sisebenzise imininingwane yomuntu echazwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo kuncike Emininingwane Yobuntu esiyiqoqayo kanye nomongo othize lapho siqoqa khona imininingwane:
World Tourism Portal idinga ukwenza isivumelwano nawe
Unikeze World Tourism Portal imvume yokwenza njalo
Icubungula imininingwane yakho World Tourism Portal izintshisekelo ezisemthethweni
World Tourism Portal idinga ukulandela umthetho
World Tourism Portal uzogcina imininingwane yakho kuphela uma nje kudingeka ngenhloso ebekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Sizogcina futhi sisebenzise imininingwane yakho kuze kufike lapho kudingeka khona ukuthobela izibopho zethu zomthetho, sixazulule izingxabano, futhi sisebenzise izinqubomgomo zethu.
Uma ungumhlali we-European Economic Area (EEA), unamalungelo athile okuvikela idatha. Uma ufisa ukwaziswa ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo ngawe futhi uma ufuna ukuthi lususwe kumasistimu ethu, sicela uxhumane nathi.
Ezimweni ezithile, unalo lungelo lokuvikela idatha elandelayo:
Ilungelo lokufinyelela, ukubuyekeza noma ukususa ulwazi esinalo kuwe.
Ilungelo lokuhoxisa imvume
World Tourism Portal kulandela inqubo ejwayelekile yokusebenzisa amafayela we-log. Lawa mafayili enza izivakashi zivakashele amawebhusayithi. Zonke izinkampani zokubamba zenza lokhu kanye nengxenye yokuhlaziywa kwemisebenzi yokusingathwa. Imininingwane eqoqwe ngamafayela we-log ifaka amakheli we-inthanethi (i-IP), uhlobo lwesiphequluli, umhlinzeki wesevisi ye-Intanethi (ISP), usuku nesikhathi isitembu, amakhasi abhekisele / aphumayo, futhi mhlawumbe nenombolo yokuchofoza. Lokhu akuxhunyiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhonjwa uqobo. Inhloso yolwazi ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isiza, ukulandela ukuhamba kwabasebenzisi kuwebhusayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu.
Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, World Tourism Portal isebenzisa 'amakhukhi'. La makhukhi asetshenziselwa ukugcina imininingwane kufaka okuthandwa yizivakashi, namakhasi akuwebhusayithi lapho isivakashi sifinyelele noma sivakashele. Imininingwane isetshenziselwa ukwengeza ulwazi lwabasebenzisi ngokwenza ngezifiso okuqukethwe kwekhasi lewebhu lethu kususelwa kuhlobo lwesiphequluli sabavakashi kanye / noma olunye ulwazi.
Ungaxhumana nalolu hlu ukuthola inqubomgomo yobumfihlo yomlingani ngamunye wokukhangisa we World Tourism Portal.
Qaphela ukuthi World Tourism Portal ayinakho ukufinyelela noma ukuphatha la makhukhi asetshenziswa abakhangisi beqembu lesithathu.
World Tourism PortalInqubomgomo Yobumfihlo ayisebenzi kwabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ngakho-ke, sikucebisa ukuthi uthinte Izinqubomgomo Zobumfihlo ezifanele zalesi seva esivela eceleni ukuze uthole imininingwane eminingi. Kungafaka ezikwenzayo nemiyalo yokuthi ungazikhipha kanjani kwezinye izinketho. Ungathola uhlu oluphelele lwale Izinqubomgomo Zobumfihlo nezixhumanisi zazo lapha: Izixhumanisi zenqubomgomo yobumfihlo.
Ungakhetha ukukhubaza amakhukhi ngokusebenzisa izinketho zakho zesiphequluli ngasinye. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuphathwa kwe-cookie ngeziphequluli ezithile zewebhu, lingatholakala kumawebhusayithi apheqululwazi. Yini Amakhukhi?
World Tourism Portal ayiqoqi ngamabomu imininingwane eqondiswayo yomuntu siqu evela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka ye-18. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho ihlinzeka ngalolu hlobo imininingwane kwiwebhusayithi yethu, sikukhuthaza ngokuqinile ukuthi usithinte ngokushesha futhi sizokwenza imizamo yethu yonke yokususa lolo lwazi kumarekhodi ethu.
Inqubomgomo yethu Yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi isebenza ngokusemthethweni kubavakashi bewebhusayithi yethu maqondana nemininingwane ababelana ngayo noma / noma abayiqoqayo World Tourism Portal. Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngokungaxhunyiwe kwi-inthanethi noma ngeziteshi ezingekho kule webhusayithi.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuthi eyethu Inqubomgomo yobumfihlo futhi uvumelane nakho Imibandela.